Muummichi Ministeera Paakistaan Prezdaantiin Faransaay jibbiinsa islaamummaa babal'isaa jira jedhe - NuuralHudaa
Muummichi Ministeera Paakistaan Imraan Khan fuula twitter isaa irrati, Prezdaantiin Faransaay Imaanu’el Makroon yakka ajeechaa raawwatametti fayyadamee jibbiinsa Islaamummaa babal’saa jira jechuun yakke. Imraan Khan akka jedhetti, jalqabuma irraa yakki ajeechaa sun kan raawwatame, eega Makroon haasaya jibbiinsaa Islaamaa ifatti lallabuu jalqabee booda tahuu ibsuun, hogganaan biyyaa tokko hawaasa biyyattii walitti fida malee addaan qoqqooduu hin malle jechuun qeeqe.
Jibbiinsa Islaamaa Faransaay keessati hammaate kanaan walqabatee, dararaan muslimoota biyyattii irraatti raawwatamus hammaatee jira. Maqaa mirga yaada ofii ibsachuu jedhuun maqaa balleessiin Ergamaa rabbii fi Islaamummaa irrati raawwatamu kun muslimoota addunyaa dallansiisee jira.
Hoggantoota biyyoota Islaamaa jidduu hanga ammaatti Prezdaantii Turkiyaa fi Muummicha Ministeera Paakistaan qofatu kallatiidhaan mootummaa Faransaay balaaleffatan. Haata’u malee dallansuu ummata muslimaa irraa heddummaataa dhufe hordofuun, miseensonni paarlaamaa Kuweeyt fi Urdun muraasni mootummoonni biyya isaanii kallattiidhaan Faransaay akka balaaleffatan gaafataa jiran.
Abdulfattah she/mahmad umer says:
Namni muslimatahe marti jaalala ergamaa keenya nabi muhammediifqabnu s a wمحمد صلى الله عليه وسلم amma yeroon agarsiisuuqabnu
As wr wb. Aduuwin islaama duris ergama Kenya hin dhiifne hammas hin dhiifne rabbin nurra halafisu maqa rasuula solola Wali wosolom qofa faarsu isan gargaaru hin tau. Ilmiiti jabaadhu
Musab Zakir says:
as wr wb vidiyoo isin nuuf gadhiiftan naaf bu’uudide akkamittan buufadha
September 27, 2021 sa;aa 11:17 pm Update tahe